Kooxda Xuutiyiinta oo ku eedeysay dowlada Soomaaliya inay ku soo xadgudubtay badeeda - Jowhar Somali news Leader
Home News Kooxda Xuutiyiinta oo ku eedeysay dowlada Soomaaliya inay ku soo xadgudubtay badeeda
Kooxda Xuutiyiinta oo ku eedeysay dowlada Soomaaliya inay ku soo xadgudubtay badeeda
Saraakiil u hadashay kooxda hubeysan ee Xuutiyiinta Yaman ayaa waxa ay ku eedeeyeen Dowladda Faderaalka Soomaaliya in ay ku soo xadgudubtay Jesiiradaha yaryar ee Soqotra ee u dhexeeya Xuduud-baddeedka dalalka Yemen iyo Soomaaliya.
Wakiilka Maamulka Xuutiyiinta ee Shidaalka iyo Macdanta Axmed Daaris ayaa ka sheegay eedeyntan kulan gaar ah oo ay ku yeesheen magaalada Sanca madaxda Kooxda Xuutiyiinta.
Wakaalada Wararka Yemen ee SABA ee ay Xuutiyiinta maamulaan ayaa sheegtay in ay DFS qabsatay, kuna soo xadgudubtay Madax-banaanida dhuleed ee Jesiiradaha Soqotra, si ay u noqoto goob cusub oo ay Soomaaliya ka baari doonaan Shidaalka.
Kooxda Hubeysan ee Xuutiyiinta waxa ay ku eedeeyeen Dowladda Federaalka Soomaaliya inay doonayso in ay Qaramada Midoobay ka ansixiyaan, kana xaqiijiyaan lahaashaha Biyaha Gobalka iyo Jesiiradaha Soqotra.
Xuutiyiinta ayaa waxa ay ku hanjabeen in ay Sharciga Caalamiga la tiigsan doonaan haddii ay DFS ama Urur ama Shirkad kasta oo Caalami ah qaadaan fal kasta oo sharci-darro ah oo ku aadan arrintaasi.
Illaa hadda ma jiro wax jawaab ah oo ay dowlada federalka ka bixisay eedeymaha ay u soo jeedisay kooxda Xuutiyiinta ee maamusha caasimada dalka Yemen.